Taliska ciidanka Booliska iyo maamulka G/Banaadir oo kala saxiixday heshiis la xiriira daryeelka caruurta “Sawirro” – Radio Muqdisho
Taliska ciidanka Booliska iyo maamulka G/Banaadir oo kala saxiixday heshiis la xiriira daryeelka caruurta “Sawirro”
R/wasaare ku xigeenka dalka, oo ay wehliyaan wasiirro ka tirsan xukuumadda ayaa ka qeybgalay munaasabad lagu saxiixayay daryeelka caruurta SDoomaaliyeed ee agoonta ah iyo kuwa dib jirka ah.
Kulanka oo lagu qabtay xarunta wasaaradda cadaaladda ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa heshiis ku kala saxiixday taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Banaadir kaasoo ku saabsan daryeelka iyo xanaanada caruurta agoonta ah eek u tabaaleeysan magaalada Muqdisho.
Munaasabadda waxaa goob joog ka ahaa R/wasaarare ku xigeenka Maxamed Cumar Carte, Wasiirka amniga gudaha, wasiirka haweenka iyo xuquul insaanka Sahro Maxamed Cali Smaatar, ku simaha wasiirka Cadaalada Fahmo Axmed Nuur iyo mudanyaal ka tirsa baarlamanka.
Gudoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab”ayaa sheegay in maamulkiisu gacan weyn ka geeysan doono daryeelka caruurta ku tabaaleeysan Muqdisho isagoo intaa ku daray iney ciidanka Asluubta kala shaqeyndoonaan xanaaneeynta caruurtaasi.
Taliyaha Ciidanka ASluubta Somaaliyeed sareeye Gaas Bashiir Maxamed Jaamac ayaa faahfahin ka baxiyay dadaalka uu ugu jiro dib usoo nooleeynta howlihii ciidanka asluubta Soomaaliyeed gaar ahaan daryeelka caruurta agoonta ah iyo dhaqan celinta kuwa dibjirka ah, isagoo hoosta ka xariiqay iney dib u furayaan xarumihii lagu xanaaneeyn jiray caruurta.
R/wasaare ku xigeenka dalka Maxamed Cumar Carte Qaalib ayaa ka hadlay ahmiyada ay leedahay daryeelka caruurta ogaanta ah, isgoo ugu bogaadiyay taliska ciidanka asluubta iyo maamulka gobalka banaadir howsha ay isaga kaashanayaan daryeelka caruurta Soomaaliyeed.
Heshiiskan dhexmaray maamulka gobolka Banaadir iyo taliska ciidanka Asluubta ahaa qeexaya in labadaasi dhinac iska kaashadaan daryeelka caruurta agoonta ah ee dhibaateysan gudaha dalka.
Bandhigyadii Tayo Dhawrka ee Wasaaradda Ganacsiga oo dib u dhac ku yimid